Axmed Cabdi Qurbaawi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Yey kugu Dhex Dhiman Hibooyinkaagu!
Axmed Cabdi Qurbaawi, December 26, 2019
Ku soo dhawow 2020! “Yey kugu dhexdhiman hibooyinkaagu”! Ma rumaysan kartaa in ay maalmo yari ka dhiman yihiin 2020? Ma garan karno in aan gaadhi doono, laakiin waa u sahan iyo sahay qaadaneynaa. Markii aan dhammeyno dabaaldegyada iyo wax ka barashadda sanadkii tagay waxaan diyaar u nahay in aan mar labaad dhaqdhaqaaqno hadday ahaan lahayd yool cusub oo aad rabto in aad bilowdo, ganacsigaagii oo aad wax ka badal iyo wadiiqo cusub u furi rabto, waxbrashadii aad sanadkii tagay ka gaabisay oo dib boodhka uga jafi rabto, guurso waad gabowdaye oo dhagahaaga ku bad badatey iwm. Haddaba waxaa la joogaa …
Axmed Cabdi Qurbaawi, November 23, 2019
Maalmahan waxaa aad loo hadal hayaah “Asteroids” kaasoo ku soo wajahan dhulka. Bal waxaan isla yara eegaynaa “asteriod” waa inna ayo? Dad badan baa hurdida ladi la’, ha lumin hurdadaadda maxaa yeelay waxyeelada asteroids samayn badan kuma laha qaarada Afrika, laakiin waa inaad ka taxaddartaa safarada hawada. Asteroids-ku waa meerayaal darbi-jiif ah oo khatartoodda leh. Waa dhadhaabyo xanbaarsan isku-dhisyo sun ah iyo hanfi dhagaxada dhalaalinaya. Asteroid-ku waa dhadhaab yar yar/ dhagax-bir labeed yar oo daaf wareegga Qoraxda. Waa dhulal yar yar oo bilaa hoyi ah, habeenba meel u hoyda. Ma jirto sharci bah-Qoraxeed oo qabta. Waxay marti u yihiin dhinbilo …
Naftaadaa leh qiimenyta kowaad Is-yasida iyo isku quuri waaga aad naftaada kula kacdo ayaa carqalad weyn ku ah barashada sida naftaada loo jeclaado. Haddii aad had iyo jeer tahay mid dadka raali galiya, waxaad naftaada kula jirtaa jihaad iyo dagaal joogto ah, kumana noolaan doontid xasilooni iyo jacaylka aad u baahan tahay. Markii aad joojiso raaligalinta iyo farxad-ka raadinta dadka kale, waxaad bilaabaysaa in aad is barato adigu oo is-jacayl idin dhex maro naftaadda. Waxaad ogaaneysaa in aad u baahnayn qof kale in uu wanaag dareensiiyo naftaada ee adigu aad u hayso farxada iyo rayn raynta. Dadka in ta badan …
Axmed Cabdi Qurbaawi, November 1, 2019
Joogtee wax akhriskaaga Taajiriintu waxay mudnaanta kowaad siiyaan wax akhriska halkii uu lacag kaliya ka fakari lahaa. Sida uu qorey Brian “Sideetan iyo sideed boqolkiiba taajiriintu waxay soddon daqiiqo ama in ka badan ku bixiyaan maalin kasta wax akhris” Intooda badan waxay wax u akhriyaan si ay u kororsadaan aqoon ee kama ahan madadaalo. Dadka hodanka ah waxay akhriyaan seddex nooc oo buuggaag ah: taariikh nololeedka dadka guuleystay, buugaagta ka shakeeya horumarka shaqsiga iyo taariikhda. Jimicsigaaga badi Toddobaatan iyo lix boqolkiiba dadka hodanka ah waxay jimicsi sameeyaan 30 daqiiqo ama in ka badan maalin kasta. Jimicsiga wuxuu noqon karaa …
Kalsoonidaradu waxay dhaawacdaa aragtidaada, aqoontaada iyo meheraddaada nolosha. Waxay saameyn ba’an ku reebtaa xidhiidhkaga bulsho. U istaag Naftaadda Haddii dareenkaaga kalsooninimo hooseeyo ma ahan mid aad ku dhalatay adigu waxaad ka dhaxashay bulshada iyo deegaanka aad ku barbaartey. Waa marxalad qof walba oo maanta la mahadiyo soo marey. Wax ka qabashada dhibaatooyinka kalsoonidaradu sababto waa hawl adiga kuu taal, in aad ka kortana ay sandule kugu tahay. Anigu waxaan kula wadaagayaa qoddobo biyo kama dhibcaan ah, fudud oo aad sameyn karto si aad kor ugu qaaddo kalsoonidaada isla markaana aad u wanaajiso caafimaadkaaga maskaxda. Waxaan xiganayaa buugga “Indho Habeenno”, war-baahiyaha …